उर्जा विज्ञहरु भन्छन’ विश्वकै सस्तो अपर कर्णाली नेपाली आफैले वनाउनु पर्छ – Rara Khabar
उर्जा विज्ञहरु भन्छन’ विश्वकै सस्तो अपर कर्णाली नेपाली आफैले वनाउनु पर्छ
उर्जा विज्ञहरुले विश्वकै सस्तो माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना नेपाली आफैले वनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन ।
वीरेन्द्रनगरमा भएको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना सम्वन्धी छलफल कार्यक्रममा उनीहरुले स्वदेशी लगानीले नपुग्ने भएपछि मात्रै विदेशी लगानी भित्याउनु पर्ने बताएका छन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्वन्धी संझौता गर्दा नेपाल ठगिएको दावी गदै विज्ञहरुले संझौता नेपालको हितमा हुनु पर्नेमा उल्लेख गरेका छन ।
नेपाली आफैले आयोजना गर्न सक्ने भएपनि सरकारले जनतालाई लगानी गर्ने अवसरवाट बञ्चित गदै भारतीय निर्माण कम्पनी जिएमआरलाई दिएको वताएका छन ।
कार्यक्रममा पूर्व जलश्रोत मंत्री दिपक ज्ञवालीले आयोजनावाट ४ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने तर्क गर्दै यसलाई जलसययुक्त वहुउदेशिय आयोजना वनाउनु पर्ने वताउनु भयो । आयोजना संझौता गर्दा नेपाललाई घाट हुने गरी गएिएकोले त्यसको विरोध भएको भन्दै आयोजना वन्नुपर्छ भन्नेमा कसैको विमत्ति नभएको वताउनु भयो ।
पूर्व जलश्रोत सचिव डा. द्धारिकानाथ ढंगेलले भारतले नेपालमा भएको पानीको स्वार्थ अनुसार आयोजना हत्याउन खोजेको भन्दै आयोजना नेपालीलाई फाइदा हुने किसिमले वनाउनु पर्ने बताउनु भयो । उहाँले आयोजनालाई नेपाल र नेपालीको हित अनुकुल वनाउनको लागि सवैले दवाव सृजना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जलश्रोत विज्ञ रत्नसंसार श्रेष्ठले आयोजनालाई पूर्ण क्षमताको वनाउनु पर्ने भन्दै यथास्थितिमै आयोजना निर्माणको काम अघि वढन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले ४ हजार १ सय ८० मेगावाटको आयोजनालाई ९ सयमा झारिएको दावी गदै विश्वकै सस्तो आयोजना नेपाली आफैले वनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
इतिहासविद प्रध्यापक डा. सुरेन्द्र केसीले माथिल्लो जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउनको लागि सवै एकजुट हुनुपर्ने वताउनु भयो । यस्तै जलस्रोत अभियन्ता रतन भण्डारीले निर्माण सम्वन्धी संझौता नेपालको हित विपरीत भएको भन्दै नेपालको हित अनुकुल वनाउनु पर्ने वताउनु भयो ।
कार्यक्रममा राष्टिय जनमोर्चाका महासचिव जनकराज शर्मा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका केन्द्रीय सदस्य चक्रपानी शर्मा, खडानन्द लामिछाने लगायतले यथास्थितिमै आयोजना निर्माणको काम अघि वढन नदिने चेतावनी दिुनभयो ।
राष्टिय जनमोर्चा, नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा माओवादी, कर्णाली जलाधार संरक्षण समाज र माथिल्लो कर्णाली बचाऔ राष्टिय अभियानले संयुक्त रुपमा कार्यक्रम गरेका हुन ।
प्रकाशित मितिः १३ जेष्ठ २०७३, बिहीबार ११:२९